Vaovao - Fampidirana ny fomba efatra mahazatra fihinanana voninkazo hibiscus
Fampidirana ny fomba efatra mahazatra fihinanana voninkazo hibiscus
Voninkazo hibiscusmatetika no hanina amin'ny antonony ary manana sanda ara-tsakafo ambony.Amin'ny ankapobeny dia azo diovina ny voninkazo ary azo ampiana amin'ny antonony ny felany amin'ny lasopy sy ny lasopy, na azonao ampiasaina ny atody, ny lafarinina ary ny zava-manitra mba hanamboarana voninkazo atody.Ny felany dia azo ampiasaina amin'ny fanaovana dite kaopy mba hanala ny hafanana sy ny hamandoana, mandona ny havokavoka ary manala ny kohaka.
Ny hibiscus dia voninkazo matanjaka, azo ampifanarahana ary mahazaka amin'ny toerana maina sy mangatsiaka.Izy io koa dia manondro ny tsy fisian'ny farany sy ny faharetan'ny fiainana.Tsy vitan’ny hoe manentana ny fo rehefa mamony, fa mampahery sy mandrisika ihany koa rehefa ampifandraisina amin’ny dikan’ilay voninkazo.
Ahoana ny fihinanana voninkazo hibiscus？AvelaoFuyang Bestoplazao aminao.
1.Sakafo masaka hohanina
Tsy ao anaty vilany ihany no ambolena ny voninkazo hibiscus, fa azo afangaro amin'ny sakafo hafa koa ny voniny.Ny voninkazo dia azo diovina ary manala ny felany.Asio felana hibiscus, siramamy ary akora hafa ao anaty lafaoro rehefa mahandro azy, ary miandry mandra-pahatongany hohanina.
2.Aroso amin'ny lasopy
Raha ny marina, amin'ny dingan'ny fandrahoan-tsakafo akoho, gana ary henan-kisoa, dia azonao atao koa ny manampy felana voninkazo hibiscus amin'ny habetsahana mety mba hanaovana lasopy izay tsy matsiro fotsiny, fa manana sanda ara-tsakafo manokana ihany koa.Ny lasopy dia azo amboarina mba hamoahana hanitra voninkazo mahafatifaty, ary afaka mitana anjara toerana amin'ny fampangatsiahana ny ra sy ny fanadiovana ny hoditra.
Amin'ny ankapobeny dia azonao atao ny manadio ny voninkazo, manamaivana ny rano amin'ny felany, ary avy eo mikapoka ny atody mba hahatonga azy ireo hitovy.Azonao atao ny manampy lafarinina sy zava-manitra ny fangaro atody, ary sarony ny felany amin'ny sosona fangaro atody ary endasina ao anaty vilany mandra-pahatongan'ny volom-bolamena.
4.Fanamainana ho an'ny dite
Taorian'ny felany nyvoninkazo hibiscusefa nodiovina ary apetraka amin'ny masoandro, ny rano ao amin'ny felany dia azo maina ary ny dite atao amin'ny rano mangotraka 80°C.Ny felam-boninkazo dia tokony ho dimy minitra eo ho eo, mba tsy hanandrana tsara kokoa ny dite hibiscus, fa manadio ny hafanana sy ny hamandoana, mandona ny havokavoka ary mijanona ny kohaka.
Raha liana amin'ny voninkazo fhibiscus maina ianao dia mifandraisa aminayinfo@goherbal.cnFARAN'IZAY HAINGANA INDRINDRA.